Myanmar Tourism Bank Eyes Lending K20 million to SMEs | Myanmar Business Today
Home Business Local Myanmar Tourism Bank Eyes Lending K20 million to SMEs
Tourist arrivals in Myanmar between January and September topped 3.1 million, representing an increase of 600,000 tourists over the same period last year. Along with the rise in tourist arrivals, the number of small and medium-sized tour companies in Myanmar’s recently opened up market also increased.
But like SMEs in other industries, tour companies have limited access to financial services.
To cater to their needs, Myanmar Tourism Bank in cooperation with the MSME Development Committee introducedanew product in November with the goal of providing up to K20 million in loans to tour companies who are members of the Myanmar Tourism Association (MTA).
“We do not limit the number [of loans] as we plan to provide funding to all MTA members,” said U Andrew Khant, Deputy Managing Director of Myanmar Tourism Bank.
The MTA has around 400 members, for whom the bank has earmarked K700 million. Credit Guarantee Insurance loans, which require no collateral or security, are available to MTA members with one condition: They must have been in business for at least three years. Myanmar Tourism Bank will consider lending to companies that have been in operation for at least two years.
“When we say tourism, people often think of hotels. In fact, tourism covers everything from hotels to tour companies to street shops. We need to help them develop,” said U Andrew Khant.
The move represents Myanmar Tourism Bank’s first lending efforts. The bank plans to expand lending to other areas of the tourism sector including tourism services and infrastructure.
“We focus on the tourism sector for our first loans,” explained U Andrew Khant. “We made the decision atameeting of the bank’s board of directors to provide loans to other businesses related to the tourism sector in the future. We are also planning to increase the amount of the loans.”
Using the Reducing Balance Method, the bank calculates interest payments based on the outstanding principal balance instead of chargingafixed interest rate based on the original loan amount.
It will charge an annual interest rate of 16 percent and provide loans within two weeks of application date.
“After the first loans and once we know the business nature of the borrower, we will consider providing more loans onacase-by-case basis,” said the executive.
The MSME Development Committee said at the 2nd Tourism MSME Forum 2019 that it had been in talks with Yoma Bank and Myanmar Apex Bank to provide loans to SMEs in the tourism sector.
The Myanmar Investment Bank and Myanmar Tourism Association believe that providing loans to members ofatourism association will be easier with the availability of data on borrowers.
There were 1,704 hotels and motels providingatotal of 68,167 rooms in Myanmar as of December 2018,a400 percent increase from 2016. The number of tourism licenses increased to 2,712 during the same period. Tourism-related businesses hope to have more sector-specific banks to help with their development.
Grantedalicense in July 2018, Myanmar Tourism Bank has opened branches in Yangon, Mandalay and Naypyidaw. With plans to open 10 more branches in areas with strong tourism businesses, it is looking to provide new services including international payment solutions, special savings interest rate and other loans.
မြန်မာပြည်ကို ဧည့်သည်လာရောက်မှှုအနေနဲ့ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီလကနေ စက်တင်ဘာလအထိ ဧည့်သည်လာရောက်မှှုအနေနဲ့ ၃ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ရှိပြီး အနှစ်ကာလတူထက် ခြောက်သိန်းကျော် ပိုမိုခဲ့ပါတယ်။
အသေးစား ၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေဟာ လုပ်ငန်းစတင်ဖို့နဲ့ တိုးချဲ့ဖို့ ချေးငွေရရှိရဖို့ ကန့်သတ်ချက် အများအပြားရှိနေကြသလို ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း ပုံစံတူကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။
မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်က မြန်မာ့ခရီးသွားကဏ္ဍတိုးတက်စေဖို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကို ချေးငွေပံ့ပိုးပေးမယ့် အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလထဲမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုချေးငွေထုတ်ချေးပေးဖို့ Tourism MSME(Micro, Small & Medium Enterprise) Development ကော်မတီနှင့်ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းအသင်းဝင်တွေကို တစ်ဦးကို အများဆုံးကျပ်သိန်း(၂၀၀)အထိ စတင်ထုတ်ချေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အသင်းဝင်တွေအားလုံးထဲက လူဘယ်နှစ်ယောက်ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး။ အသင်းဝင် အားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်” မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်၏ Deputy Managing Director ဦးအင်ဒရူးခန့်က ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အသင်းဝင်ဦးရေ(၄၀၀)ခန့်ရှိပြီး ဒီထဲက အသင်းဝင်အားလုံးကို ချေးငွေထုတ်ချေးရန်ဖို့ မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်က ကျပ်သိန်း(၇၀၀၀)ခန့် ထုတ်ချေးရန် လျာထားပါတယ်။
ချေးငွေလျှောက်ထားဖို့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ အပေါင်ပစ္စည်းမလိုဘဲ Credit Guarantee Insurance စနစ်အပြင် အခြားလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ချေးငွေရရှိဖို့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းအနည်းဆုံးသုံးနှစ်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး အနည်းဆုံး(၂)နှစ်အထိ လည်ပတ်နေသောလုပ်ငန်းများပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသွားမယ်လို့ ဦးအင်ဒရူးခန့်ကဆိုပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုရင် ဟိုတယ်လို့ပဲပြေးမြင်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဟိုတယ် လည်းပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ပြောရရင် လမ်းဘေးဈေးသည်ကအစ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်အနေနဲ့ လက်ရှိပထမဆုံးချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းအဖြစ် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းနောက်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၊ ခရီးသွားကဏ္ဍအတွက် အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍများပါ ချေးငွေထုတ်ချေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်ဟု အဆိုပါဘဏ်က ဆိုပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့အခုမှစတင်ထုတ်ချေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Tourism ကဏ္ဍကို အဓိကထားတာဖြစ်ပါ တယ်။ နောက်ပိုင်းTourism နဲ့ဆက်စပ်ကဏ္ဍအတွက်ပါ ချေးငွေထုတ်ချေးဖို့အတွက်လဲ ဘဏ်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ အစည်းအဝေးထိုင်ထားပြီးသားပါ။ အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ ချေးငွေပမာဏအပြင် ထပ်တိုးဖို့အတွက်လဲ ပြင်ဆင်ထားပါတယ် ” လို့ ဦးအန်ဒရူးခန့်က ရှင်းပြပါတယ်။
ထုတ်ချေးမယ့် ချေးငွေအမျိုးအစားက Reducing Method ကို သုံးထားတယ်လို့ ချေးငွေမိတ်ဆက်ပွဲမှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒီ Method ကို ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် တစ်လပြီးတစ်လ လစဉ်ပြန်ဆပ်ရင်း တကယ့်ဆပ်ရမယ့် အတိုးအရင်းပေါင်းက နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အတိုးနှုန်းအနေနဲ့ အများဆုံး(၁၆)ရာခိုင်နှုန်းအထိကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ချေးငွေအတွက် စာရွက်စာတမ်း စုံလင်တာနှင့်အမျှ ငွေကြေးကို နှစ်ပတ်အတွင်းထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“တကယ်လို့ချေးငွေရပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က business nature ကိုနားလည်သွားတာနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Case by Case စဉ်းစားပြီးတော့ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းတာဖြစ်ဖြစ် ချေးငွေကို အခုထပ်တိုးပြီ ထုတ်ချေးလို့ရပါတယ်” လို့ ဦးအန်ဒရူးခန့်က ဆိုသည်။
လက်ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အငယ်စား၊ အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ မေလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Tourism MSME Forum 2019၌ ဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ချေးငွေရရှိနိုင်ရန် ရိုးမဘဏ်၊ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင် ဘဏ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးထားကြောင်း MSME Development Committee ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ ခရီးသွားကဏ္ဍအတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အောက်မှာ အသင်းဝင်တွေကို ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းက တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုရရှိဖို့ လွယ်ကူသလို ထုတ်ချေးလိုက်တဲ့ ချေးငွေအတွက်လဲ အကျိုးရရှိအသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဘဏ်ဘက်ကရော၊ အသင်းဘက်ကပါ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဟိုတယ်နဲ့ တည်းခိုရိပ်သာလိုင်စင် ၁၇၀၄ လုံး (အခန်း၆၈၁၆၇ခန်း)ထိ ရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကနဲ့ယှဉ်ရင် အလုံးရေး ၄၀၀ နီးပါးတိုးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလိုင်စင် ၂၇၁၂ ခု ထိရှိပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကို အားပေးရာရောက်တဲ့ ခရီးသွားဘဏ်လို အခြားကဏ္ဍအလိုက် ဘဏ်တွေပိုလည်ပတ်လာနိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက မျှော်လင့်ကြပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းက ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်တို့တွင် ဘဏ်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်က ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံတကာ payment solution ၊ ခရီးသွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေဖို့ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ၊ မြန်မာ့ခရီးသွားကဏ္ဍအတွက် အထူးငွေစုအတိုးနှုန်းများဖြင့် Customers တွေ၏ လိုအပ်ချက် များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားကောင်းတဲ့ ဒေသ (၁၀) ခုမှာ ဘဏ်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
Previous articleCBM to Banks: Don’t Accept Untaxed Cash
Next articleYoma Car Share Expands to 25 Rental Hubs